Fikarohana momba ny firaisana Trangam-boalobok'i George Eliot (Mary Ann Evans) | Freda Chaney DD sy ny sakaizany, George Henry Lewes: Fiainana niainana taloha momba ny fiainana tamin'ny famindrana ny fanahy Orb - Ny firaisana amin'ny vatana vaovao
Proposed by: Freda Chaney, DD
Voamarina amin'ny: Fivoriana fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
From: Karma Road: Mandeha amin'ny fotoana miaraka amin'i George Eliot, nataon'i Freda Chaney, DD
Article by: Freda Chaney, DD
George Eliot sy George Henry Lewes Reborn?
Izaho ve dia teraka indray tamin'ny taonjato faha-19 Mary Ann Evans, izay fantatra kokoa amin'ny anarany, George Eliot? I 2009 no nahitako io mpanoratra be mpamaky io ary mbola ao anaty fanandramana mahafinaritra aho amin'ny alalan'ny fitoviana eo amin'ny zato eo anelanelantsika, izay toa manondro an'io famaranana io. Tsy milaza aho fa manana talenta fanoratana nataon'i George Eliot, saingy tsy misy fisalasalana ny fanomezam-pahasoavana nosoratanay roa taona lasa izay, ary nanitatra ny asan'ny fiainanay.
In 2018, Walter Semkiw, MD Nifandray tamiko aho rehefa avy namaky ny bokiko, Karma Road: Mandeha amin'ny fotoana miaraka amin'i George Eliot. Taorian'ny resadresaka fohy dia nanontany ny alaheloko izy hanontany momba ny fampahalalam-baovao mahazatra, Kevin Ryerson, amin'ny anarako.
Tamin'ny fotoam-pivorian'ny Walter, dia voamarina fa teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i George Eliot, ary ankoatr'izay, ny vadiko dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray tamin'ny fiarahan'ny fanahin'i Eliot 25 taona, George Lewes. Raha ny tena izy, Norman dia misy itovizany amin'i Lewes ao anatin'izany ny filozofia, mpanoratra ary ny anjara asa fanohanana ataony eo amin'ny fiainako.
Ankoatra ny famakian'i Ryerson, i Walter dia nangataka ahy mba hanome sarin'ny tenako ho toy ny sarin'i George Eliot. Ny fampitahana amin'ny lafiny iray dia maneho ny fitoviana miharihary. Raha maso ny varavarankelin'ny fanahy dia afaka mahita fa ny masoko dia mitovy amin'ny an'i Eliot. Ny sarin'i George Eliot dia maneho ny lavalava lava, ny famolavolana mena ary ny volony mainty. Ny endri-javatra dia mitovy.
Na dia ny safidy ataonay amin'ny akanjontsika aza dia mitovy. Rehefa mijery ny sarimihetsika nalaina tao amin'ny 1994 aho, dia manao akanjoko Victoriana aho miaraka amina pinpo eo amin'ny vozona.
Ny sarin'ny fianakaviana avy ao amin'ny 1980 dia maneho bebe kokoa ireo preferences garderie iray, anisan'izany ny akanjoko am-boninahitra sy ny akanjon'ilay mpivaro-piangohiana tahaka ny nataon'ireo George Eliot. (Jereo ny Sarin'i George Eliot tao amin'ny Kianja Nuneaton, UK.)
Ny fanambarana ao amin'ny tranombakoka: fanahy Orb iray misy hafatra
Ity tantara mahaliana ity dia nanomboka tao amin'ny 2009 rehefa naka ny sarin'ny trano fitehirizam-boky tao amin'ny fandriam-bahiny sy ny sakafo maraina aho. Nampitombo ny sary aho, nahita tarehy vavy roa tao anaty orb.
Azafady tsindrio ny sary raha te hijery ireo vehivavy roa ao amin'ilay orza.
Fanamarihana: Amin'ny lafiny iray, ny vehivavy eo amin'ny ilany havanana amin'ny orb dia toa manana fotsy hoditra ao am-bavany. Freda, teo am-panokafana ilay boky ilay orza niparitaka, dia nahita ny endrik'ilay vehivavy ao amin'ny orza. Na dia toa hitovy aza ny toe-java-doha.
Ilay orza dia nijanona teo ambony tahirin-tsarimihetsika iray izay misy alokaloka mena, George Eliot Ny miorina eo amin'ny tsilo (Heritage Club edition, 1963). Ny renirano no anaran'ny renirano iray any Angletera.
Famerenana ny Boky Fomba Fanontana Boky Amin'ny Andavanandro
Tsy nahalala ahy ilay boky. Satria tia boky sy gazety izahay mivady, Mill on the Floss dia anisan'ireo fanangonam-bokatra 15,000 izay novidinay, na izaho na ny vadiko mbola tsy namaky ny boky Mmarary eo amin'ny Floss. I Norman no nametraka ireo rakipeo rehefa nifindra tao amin'ity trano ity izahay tamin'ny 1998. Mety izany no tsy hitako mihitsy Ny miorina eo amin'ny tsilo talohan'ny nandraisako io sary io.
Nihazakazaka aho niresaka tamin'ny vadiko momba ny fisehoan-javatra hafahafa. Nampirisika ahy hamaky ilay boky izy-mba hianatra izay mety hampianarany ahy. Rehefa niverina tao amin'ny tranombakoka aho mba haka ilay boky, dia hitako fa ny endriny dia nahitana ny sarin'ny trano fialan-tsasatra iray izay nitovitovy tamin'ny bokin'ny boky nosoratako. (House Blessings, 1997). Tsindrio eo amin'ny boky manazava sary mba hanitarana azy ireo.
Ny Mill on the Floss Inside Cover
Nanokatra ny sarin'i Eliot aho, nahita sary hosodoko anankiroa nipetraka an-jatony izay nitovy tamin'ny endriky ny tarehiny. Nifantoka tamin'ny manam-pahaizana orb iray aho, Dr. Klaus Heinemann, mba hianatra bebe kokoa momba ny orbs. Ny miorina eo amin'ny tsilo ny tetikasa nataoko tamin'ny Dr. Heinemann dia nitarika ny tantaram-piainako Orbs: Ny iraka sy hafatra momba ny fanantenana (Hay House, 2010).
Fandalinana siantifika momba ny orza hita amin'ny sary nataon'ny mpahay fizika NASA sy Stanford Klaus Heinmann PhD
Fanamarihana: Ny fanazavana ny antony mahatonga ny orza sasany nalaina sary dia heverina ho toy ny zavamananaina azo jerena amin'ny:
Spirit Being Orbs: Ny fikarohana nataon'ny mpahay fizika Klaus Heinemann, PhD
Ny toetran'i George Eliot momba ny tantaram-piainany ao amin'ny The Mill on the Floss dia taratry ny fiainan'i Freda Chaney
Ny tantaran'ity fiainako ity dia maneho firenena tsotra mampitombo ny faniriana hampivelatra ny fianarako tahaka ny an'ny mpanatontosa Maggie ao The Mill on the Floss. Ny fiainako ihany koa dia maneho ny an'ny an'i Eliot amin'ny fomba iray satria i Maggie dia karazan'olona autobiografika an'i Eliot.
Nanomboka nanoratra tamin'ny faha-roa ambin'ny folo taona aho ary nianatra asa soratra mamorona sy anglisy amin'ny Otterbein College (Oniversite Otterbein ankehitriny). Nahazo mari-pahaizana avy amin'ny American Institute of Holistic Theology (AIHT) aho ary nanatrika atrikasa fanoratana tao amin'ny Kenyon College.
Ny famoahana ahy voalohany dia poezia tao amin'ny gazety iray teo an-toerana ary tamim-pihetseham-po, ny gazety voalohany nataon'i Eliot dia poezia tao amin'ny gazety iray. Tena mpamaky aho. Anisan'ny mpanoratra tena tiako indrindra i Ralph Waldo Emerson. Nanokana tononkalo iray aho, Ny Fivoriana tao Emerson '. George Eliot nihaona tamin'i Emerson fony izy mbola tovovavy. Nizara fiara fitateram-bahoaka tany Stratford, Angletera izy ireo niaraka tamin'ireo namana manan-danja, ireo Brays.
Hoy izy tamin'ny namany Sara Hennell, fa i Emerson dia "... ny voalohany iray Efa nahita aho hatramin'izao. "Ary tamin'io fihaonana io dia nilaza i Emerson momba an'i Eliot hoe:" Manana fanahy sangisangy io tovovavy io. "Nandinika ny bokin'i Eliot avy tao amin'ny Tranombok'i Boston i Emerson taoriana kelin'izay. Hita fa niasa mafy ny mpandinika roa. Namaky sy namerina namaky ny asan'i Emerson i Eliot. Fantany koa i Henry David Thoreau, iray amin'ireo mpanoratra tiako indrindra.
Norman Chaney ho fampianaran'i George Henry Lewes
Ny vadiko, Norman, mpampianatra momba ny oniversite nandritra ny dimampolo taona, dia nitazona an'i Emerson sy Thoreau tamim-pitiavana. Ny bokin'i Norman, Ilay Tany nomena anarana (Amazon, 2017), mizara taratra maro momba ny Concord Transcendentalists. Miara-miasa aminay, amin'ny maha tompon'andraikitry ny The Chaney Manor Bed & Breakfast, izahay sy Norman dia miara-mamaky sy manoratra miaraka amin'i Eliot sy Lewes tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo.
Ilay George Emperor George Eliot, George Henry Lewes, dia fantatra amin'ny asa sorany filozofika, indrindra ny bokiny, Ny Tantaram-pahaizana Biolojika momba ny Filôzôfia (1852). Norman dia nanoratra boky filôzôfika, Sary enina amin'ny natioran'olombelona (Prentice-Hall, 1990), ahitana tantara biolojika ahitana filozofa enina lehibe. Lewes sy Norman dia tsy nampiasa anaran-tsampy, fa i Eliot kosa.
Freda dia mampiasa ny anaran'ny penina lehilahy, toa an'i Mary Ann Evans
Tany am-piandohan'ny asa soratako dia nampiasa ny anarana pen'i Noel Bleu aho. Ny anaran'i George Eliot tamin'ny nahaterahany dia Mary Anne Evans, saingy nampiasa karazany maromaro an'io anarana io izy talohan'ny nifidianany ny nom de plume, George Eliot. Nisafidy ny hampiasa anaram-penina lahy i Eliot satria tsapany fa tsy noheverina ho zava-dehibe ny mpanoratra vehivavy tamin'ny taonany. Ny fanambadiana tokana dia an'i John Walter Cross tamin'ny 1880, naka ny anarana hoe Mary Ann Cross. Mahagaga fa ny anaran'ny vadiko voalohany dia John Walter.
Miaraka amin'ny fanamafisana ny fomba amam-panaovan'ny olona sy ny fanirian-drivotra hahalala ny marina, dia niresaka tamin'ny manam-pahaizana malaza aho, Dr. Doris Cohen, mpanoratra Famerenana: fiainana an-taonany, fiainana ary fahaterahana indray, (Hay House, 2008) mba hijery raha afaka mianatra bebe kokoa momba ny fifandraisana ahiahiko amin'ny mpanoratra Victoriana aho. Nihalalina ny fikarohana rehefa nilaza tamiko ilay psychic fa izaho no zandrin'ilay anabavy. Raha ny marina, George Eliot dia zandriny indrindra tamin'ireo rahavavy roa nateraka tamin'i Robert sy Christiana Evans. Dr. Cohen dia nizara ny soso-kevitra sasantsasany momba ny fandresena ny trauma teo amin'ny fiainana taloha.
Taorian'ny fanamafisana avy amin'ny psychic dia nandeha tany Freda ny fiainany taloha
Ny fanambarana fa afaka ny ho teraka indray aho tamin'ny nahaterahan'i Eliot dia nanosika ahy hanao fifandraisana tany Angletera, izay toerana niainan'i Eliot. Nifantoka tamin'ny fiarahan'ny George Eliot aho mba hialoka amin'ny zava-drehetra Eliot, ary tsy ela taorian'izay dia nandeha niaraka tamin'ny vadiko tany Angletera.
Tranom-barotra toy ny androany
Nitoetra tao amin'ny trano fonenan'i Eliot aho, ny Tranon'i Griff (tranobe manan-tantara taloha sy tranonkala manan-tantara nasongadina eo amin'ny sary eo ankavanana), nahafahako nahatsapa ny fiainan'ny mpanoratra isan'andro tao amin'ny homestead. Nahatsiaro hafahafa aho tao an-trano nanomboka tany am-piandohana. Nisy fiverenana mahaliana nitranga nitranga rehefa narary mafy ny vadiko ary tsy maintsy nentina tany amin'ny George Eliot Hospital, fotoana fohy avy amin'ny Tranon'i Griff!
Karma Road: Mandeha amin'ny fotoana miaraka amin'i George Eliot
Fotoana fohy taorian'ny fitsidihako tany Midlands any Angletera, dia nanomboka namorona boky momba ny fifandraisan'i Eliot sy izaho aho. Efa saika nanoratra ny tantara rehefa namelabelatra ny fitoviana tsirairay aho. Nanangona ny zava-misy avy amin'ny biography of Marghanita Laski aho, George Eliot (Thames sy Hudson, 1973) ary maro ireo andinin-tsoratra hafa azoko atrehina. Noho ny fahalianana dia nanao fikarohana tetiarana aho. Nianatra aho fa ny reniben'ny renibeko dia nanambady lehilahy iray izay mitovy anarana amin'ny anaran'ny mpanoratra tantara, Evans. Fifandraisana ve izany?
Nahitana tarehimarika avo zato monja aho, ka nahitana fitopolo tamin'izy ireo tao amin'ny boky nosoratako, Karma Road: Mandeha amin'ny fotoana miaraka amin'i George Eliot, (Amazon, 2015). Ny loka dia namidy tsara, nitondra fifampiraharahana, ary neken'ny Ny siansa ao ambadiky ny lalàm-pahaizana gazety toy ny "tsy maintsy mamaky boky."
Na dia navoaka aza ny bokiko, dia nitohy ireo synchronicité. Arakaraky ny nitadiavako no nahalasa ahy kokoa. Indray andro raha nividy tranom-barotra faharoa izahay mivady, dia nahita volavolan-tarehimarika maromaro nifanaovako teo amin'ny takelaka ambany aho. Nahatratra ny iray tamin'ireo boky aho ary nanokatra izany mba hitady tononkalo nataon'i Eliot The Choir Tsy Hita Maso. Nividy ny kitapo aho, ary rehefa tonga tao an-trano aho, dia nanomboka nitady ny pejin 'ny boky tsirairay. Nianatra aho fa poezia iray monja tao amin'ny boky manontolo nosoratan'i George Eliot. Inona ireo fahasamihafana amiko raha nisafidy ny boky marina avy ao amin'io tranombarotra io, ary manokatra ny pejy marina mba hahitana ny tononkalon'i Eliot?
Indray mandeha hafa, rehefa nitsidika an'i Amherst, Massachusetts, izahay sy ny vadiko dia nijanona mba hitsidika ny trano fonenan'i Emily Dickinson. Nanintona ahy foana ny poety mpikomy. Ilay mpitety lalana dia nitondra anay tany amin'ny efitrano fandrianan'i Emily tany amin'ny rihana faharoa. Raha vao niditra ny efitrano aho dia nahita sarin'i George Eliot teo amin'ny rindrina! Nahita lahatsary izahay izay nanambara fa i Emily Dickinson dia mpankafy an'i George Eliot. Ny tranom-pianakaviana Dickinson dia nahitana ny tantarany.
Ny fiaraha-miasa Eliot mbola mitohy dia nahitàna mpikambana hafa ao amin'ny fianakaviana ihany koa. Vicki, zanakavaviko, dia nanolotra ahy tamin'ny bokim-bokim-bokin'i George Eliot izay hitany nandritra ny fialantsasatra. Hitako fa ireo lohalika voalahatra teo amin'ny fonony teo aloha dia toa ahy! Ny voalohany dia GE, saingy ao amin'ny soratra amin'ny teny Anglisy Anglisy dia mifamadika amin'ny hafa, dia tahaka ny FC!
Tany 2015 dia niverina tany Angletera niaraka tamin'ny zanako vavy aho mba hanolotra ny bokiko, Karma Road, ao amin'ny mpanoratra an-tsoratra ao amin'ny Festival Warwickshire ao Astley Castle. Nijanona tao amin'ny tranon'ny Griff izahay. Ho ahy, dia toy ny niverina nody aho. Nomena fitsangatsanganana an-davarangana izahay (trano tsy miankina ankehitriny ho an'ny fianakavian'ny tompon'andraikitry ny hotely) izay nilalaovan'i Eliot nandritra ny fahazazany. Ity toeram-ponenana ity dia voatondro ho fialan'i Maggie Ny Mill on the Floss.
Lamina maromaro avy amin'ny lisitry ny fiainana Parallels
Ireto ambany ireto misy fitoviana fanampiny eo amin'i Eliot sy izaho avy amin'ny Fanazavana Fanampiny Karma Road.
ART / MOZIKA: Tian'i Eliot ny mahazatra, na dia amin'ny hosodoko aza. Ny tiany indrindra dia ireo mpanao hosodoko holandey. Toy izany koa, ilay mpanao hosodoko tiako indrindra dia i Johannes Vermeer. Manintona ahy amin'ny fahita any amin'ny firenena holandey aho. Eliot dia nanana piano lehibe mahogany. Tena nilalao izy ary nahafinaritra ny nandeha nanao fampisehoana sy teatra. Eliot dia naman'ny mpamoron-kira Liszt sy Wagner. Izaho sy ny vadiko dia manana piano grande mahogany parlor hatramin'ny taona 1996. Miara-manatrika kaonseritra sy teatra miaraka izahay. Samy niaina mozika lalina izaho sy i Eliot.
Piano lehibe an'i George Eliot ao amin'ny The Herbert Gallery and Museum
fitsingerenan'ny andro nahaterahana: Teraka tamin'ny novambra 22 i Eliot. Teraka tamin'ny novambra 3 aho. Nantsoina aho rehefa teraka ny nenitoako Freda. Ny horonam-peo dia nanoratra fa ny daty nahaterahany dia mitovy amin'ny an'i George Eliot!
FAMPIANARANA DIVINA: George Eliot dia nandalina ny maha-Andriamanitra ary nandika ny lahatsoratra ara-pivavahana. Nianatra ny maha-Andriamanitra aho ary nahazo ny doctorat avy amin'ny AIHT. Nanoratra lahatsoratra ho an'ny boky ara-panahy aho. Tahaka an'i Eliot, dia voaporofo aho fa nahita ny fahamarinana tamin'ny alalan'ny fampianaran-javatra kristianina.
FIANAKAVIANA: Maty i Eliot rehefa feno 16 taona. Maty ny reniko fony aho zazakely. Samy navesatra be ny fahalementsika. Noho ny tsy fisian'ny reny, dia notarihina izahay mba hikatsaka ny fanampiana ara-moraly sy ara-pihetseham-po avy amin'ireo ray sy reny.
Amin'ny maha-olon-dehibe anay, Eliot sy izaho dia nitady ny fiarahan'ny lehilahy amin'ny maha-mpinamana ny vehivavy. Ny dadan'i Eliot, Robert Evans, dia nanonona ny zanany vavy faravavy. Izy no nitantana ny lafiny rehetra amin'ny fanabeazana sy ny fiaraha-mientana ary ny fivavahana. Natahotra izy sao tsy hahasarika lehilahy noho ny tsy fisian'ny hatsaran-tarehy. Rehefa maty tao 1849 ny rainy dia mpilalao kely tamin'ny 29 taona i Eliot. Nifehy ny lafiny rehetra tamin'ny fiainako tany an-trano ny raiko ary nanandrana nifehy ahy ara-pihetseham-po taorian'ny mariazinay. Vokatr'ireo fomba mahazatra nataon-drain'ny rainay, dia nanana fahasarotana nandritra ny androm-piainana izahay teo amin'ny fifandraisanay zanakay-vavy.
I Isaac, rahalahin'i George Eliot, dia samy nanan-kery teo amin'ny fiainany. Nandritra ny fahazazany nandritra ny fahazazany, dia niandrandra ny rahalahiny i Eliot. Nanakaiky be izy ireo nandritra ny taona. Fotoana fohy taorian'ny nifindran'ny George Eliot niaraka tamin'ny rainy tany Coventry, dia tsy niala an-trano intsony izy. Tsy nankasitraka ny fomba niainan'ny anabaviny i Isaka. Niaraka tamin'ny tebitebin-drainy, dia namolavola drafitra izy mba hampody ny anabaviny amin'ny heviny. Ny didim-pitsaran'i Isaac sy ny fanilihana aorian'izany dia haharitra am-polony taona maro ary hisy fiantraikany amin'ny fianakaviana manontolo manohitra an'i Eliot.
Tamin'ny 1878, George Lewes, maty ny vadin'i Eliot ary i Eliot dia nanambady an'i John Walter Cross tao amin'ny 1880.
George Eliot, fotoana fohy taty aoriana, tamin'ny Dec 22, 1880, dia nahazo taratasy lavareny ho an'ny fampihavanana avy amin'i Isaac. Ity fifandraisana sambatra ity dia ny fifantohana amin'i Eliot Ny miorina eo amin'ny tsilo. Nanohina ahy lalina izany satria fony aho mbola zazavavy kely dia nandany fotoana be dia be niainana niaraka tamin'ny zandriko lahy tao amin'ny toeram-piompiana fianakaviana. Rehefa tafiditra tao amin'ny tafika ny anadahiko, nanambady, ary nanangana fianakaviana, dia nivadika ny fiainanay. Matetika ny raiko no tonga teo amin'ny fifosana izay tonga teo anelanelan'ny rahalahiko sy izaho. Mahaliana ny mahita fa nifanena indray izaho sy ny rahalahiko fony aho saika maty tamin'ny fianjeran'ny 2018.
FAHASALAMANA HEVITRA: Maty noho ny tsy fahombiazan'ny voa i George Eliot. Nanaintaina ny aretin'ny voa toy ny zaza aho. Ankoatr'izay, nampitandremana aho mba tsy hijanona amin'ny fanafody fanafody izay mety hanimba ny atiko sy ny voa. Tiako kokoa izao ny fanamaivanana fanaintainana ara-nofo hafa. Tahaka ny hoe ny orb nampiditra ity tantara an-tsary ity dia nanandrana nanambara tamiko ny mety hisian'ny tsy fahombiazan'ny voa izay nifarana ny fiainan'i Eliot.
fonenana: Raha olon-dehibe dia niaina tany amin'ireo tanànan'i Worthing sy Richmond any Angletera i Eliot sy ny vadiny. Anisan'ireo trano fonenako taloha any Ohio ny Worthington sy ny fiompiana fambolena any ambanivohitr'i Richmond. Ny trano an-trano, trano fonenan'i Eliot tany am-piandohana, manodidina ny 1800, dia trano biriky mena roa misy lakolosy. Ny tranoko misy ny roapolo taona ankehitriny, natsangana tao amin'ny 1823, dia trano briky mena roa misy lakolosy. Samy manana fidirana eo afovoany izy ireo. Ny lalana mankany Griff House sy ny Chaney Manor dia lava, samy mifarana amin'ny fitodihana boribory izay misy hazo iray maniry iray.
PARANORMAL: Ny fampidiran-tsofiko amin'ny orbs dia nahitana ny fijerena Orbs: Mihetsiketsika ny lamba DVD (Merkabah Productions, Beyond Words, 2007), ary famakiana Ny tetikasa Orb (Ankoatra ny teny / Atria, 2007). Gaga aho nahita fa nanoratra tantara novelarina i Eliot The Veiled Veil momba ny fisehoan-javatra ara-panambadiana.
TOETRA: George Eliot dia mpiambina amin'ny asany rehetra. Hatramin'ny fahazazany dia nahatsapa ny fiheveran'ny hafa azy izy. Rehefa nihaona tamin'i George Lewes izy dia nifikitra tamin'ny fifandraisana izay nanolotra azy ny finamanana tadiaviny hatrizay. Nampitony azy izy rehefa nomen'ny mpanonta na mpanao gazety famerenana tsy mahafinaritra azy. Tsy ela dia nitantana ny fifanoratana ho an'ny mpitory ho azy i Lewes mba hahafahany mifantoka amin'ny fanoratana. Ary manoratra hoy izy! Nandeha ny tenany hamokatra sangan'asa foronina izay nandany ny ankamaroan'ny fotoanany tamin'ny fikarohana antsipiriany. Mitovy ny toetrako, fa tsy toa an'i Eliot, voafehiko tanteraka ny fanoratako, ny fanitsiana, ny famoahana ary ny fifanarahana izay tafiditra ao anatin'izany rehetra izany. Norman no sofiko ary mpitsikera tsara indrindra. Amin'izany fomba izany dia maka tahaka ny andraikitr'i Lewes tamin'ny fiainan'i Eliot izy.
POETRY: Ny tononkalo Harmony navoaka tao Trano fitahiana (1997) ary ao Andriamanitra o, Ray (2015), dia ahitana fehezanteny mitovy amin'ny an'i Eliot The Choir Tsy Hita Maso (1867). Talohan'ny 2009 dia tsy mbola namaky ny tononkalon'i Eliot mihitsy aho. Ireto manaraka ireto avy amin'i Eliot The Choir Tsy Hita Maso niseho teo amin'ny marika fasana tao amin'ny Highgate Cemetery, Londres:
"Avy amin'ireo maty tsy mety maty izay miaina indray / An-tsaina no tsara kokoa noho ny fanatrehany."
Ampitahao amin'ireto tononkalo ireto ny tononkalo, Harmony, voalaza eo am-pamaranana ity lahatsoratr'asa ity, izay nahitana porofo momba ny fanahy.
Ny taona 2019 dia manamarika ny fankalazana ny faha-roanjato taona nahaterahan'i George Eliot. Ireo tantara nosoratany dia miverina amin'ny fiainana, ireo sora-baventy voafantina ary taonjato faha-19 dia namelombelona ny horonantsary sy ny teatra. Ho an'ireo izay tia ny bokin'i Eliot Middlemarch, Daniel Deronda, Silas Marner, ary mazava ho azy Ny miorina eo amin'ny tsilo, dia manavao ny fankasitrahantsika isika tahaka ny nanoratan'i Eliot ireo boky ireo ho antsika manokana ho an'ny tsirairay - mba hanampiana antsika hamakivaky ny fototry ny fiainana andavanandro. Azoko atao ny manamarina fa i Eliot dia manana anjara toerana manan-danja eo amin'ny fanokafana ny masoko amin'ny tena, maharitra ary mendrika.
Na izany aza, dia teraka amin'ny fiainana andavanandro isika mba hianatra, ho tonga, haneho amin'ny tsara indrindra ny fahaizantsika, hampivoatra ny toerana misy antsika. Ny fiainana tsirairay dia manana lanjany tsy manam-petra, ary ny tsirairay dia tokony homem-boninahitra toy izany. Tsapako ny tsy fahampian 'io fiampangana io amin'ny fiainako ankehitriny. Tsy mitazona ny fiainan'i Eliot aho ary ny volon'ny vorona manoloana ny fifandraisana sahaza, fa ny fahatsapako fa nanetry tena aho fa nanana fahafahana hianatra avy amin'ny fiainan'i Eliot mba hahafahako mandroso amin'ny fiainako tahaka an'i Freda.
Ny namako, Dr. Heinemann dia nilaza toy izao, "Aza hadino velively ny zava-dehibe eto - ary izany dia ny olona maro no mianatra amin'ny traikefa niainan'ny fiainanao, ny fahitana momba ny fiainany manokana. Izany dia hanampy azy ireo hahita ny tanjony, hampitombo ny fahatsiarovan-tena ... ary izany dia hahasoa ny rehetra. Izany no sary lehibe. "
Ao amin'ny fehintsoratra farany amin'ny Toko 20 of Karma Road, Nanoratra aho hoe: "Raha mifamatotra amin'ny fiainako i Eliot, ary toy ny hoe izy dia maniry ny evolisiona ny fanahiny, ary ankehitriny ny anjarako hamirapiratra-mba hanaporofo fa ny fiainany dia mampiakatra ny tohatra. Ny fiainako dia dingana hafa. George Eliot nahita ny feo nilainy nandritra ny androm-piainany. Fotoana izao hahitako ny tenako. Sue Monk Kidd, fanta-daza amin'ny tantara roman 2001, The Ny fiainan'ny miafina, hoy izy tao amin'ny bokiny, Firstlight (Penguin, 2007), "Ny teolojia manokana dia tokony hanomboka amin'ny teny hoe: Avelao aho hilaza tantara iray aminao." Nambarako taminao aho. Freda no anarako.
Harmony, nataon'i Freda M. Chaney, avy amin'ny Trano fitahiana (1997) ary Andriamanitra o, Ray, (2015)
"Ny fanahy itondran'ny tongotra tsy mihena amin'ny fandehanana,
fa mivelatra amin'ny elatra mazoto indrindra mba ho lasa ny volo.
Misafidy gadona ho an'ny roa ny fanahy, na dia iray aza no re,
mitondra ny enta-mavesatry ny feo marina kokoa noho ny amponga.
Ny sofina voajanahary dia tsy maheno fahamarinana lalina toy izao—
mamadika ny tenany amin'ny kiririoka tokana sy mangina.
Ny fanahy izay anaovan'ny tànana dia mahatsapa ny fotoana hanosehana azy, nefa mamela azy hisosoka azo antoka rehefa tsy maintsy atao izany. ”
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Amin'ny tranga George Eliot | Freda Chaney sy George Henry Lewes | Norman Chaney, ny endrik'ireo tarehy dia mitovy. Amin'ny tranga teraka indray ao amin'ny vatana vaovao, ny firafitry ny taolana na ny rafitry ny tarehy dia toa tsy miova, na dia mety miovaova mandritra ny androm-piainana aza ny endrika fanatsarana tarehy na malefaka.
Ny fiainana taloha talenta: Ny talenta novolavolan'i George Eliot sy ny jeneraly philosophey George Henry Lewes dia nohazavaina teo amin'ny fiainan'i Freda sy Norman Chaney. Ny fifindrana ny talenta sy ny fahaiza-manao dia hita ao amin'ny tranga maro momba ny firaisana amin'ny vatana. Anisan'izany ireto:
Ny firaisana amin'i Maria sy i Gaeta eo amin'ny sehatry ny fanambadiana Peter Teekamp sy Michelle Moshay
Trangam-panjakan'ny Zafindrafitry ny Jeneraly John B. Gordon | Loham-piaramanidina Jeff Keene
Ny firazanana ao amin'i Laurel sy Hardy
FAMPIANARANA SY FIVORIAM-BOLA novolavola tamin'ny alalan'ny fanambadiana:
George Eliot sy ny vadiny, George Henry Lewes, dia tafavory tamin'ny vanim-potoana ankehitriny tao amin'ny olona Freda sy Norman Chaney.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Rehefa voavaha ny tranga vao teraka dia hita matetika ny hafatra ara-pitenenan'ny fanahy. Toa ny olona any amin'ny tontolon'ny fanahy no maniry ny olombelona hahatakatra ny tena zava-misy sy ny mekanika momba ny vatana vaovao. Amin'ity tranga ity, ny orb iray, izay mety hanehoana fanahy iray na fanehoana sary avy amin'ny fanahy iray, dia nitarika ny Freda hahita ny fiainany taloha. Tsindrio ny sary orb raha hanitatra azy.
Tsidiho: Tranonkala Freda Chaney
Sarin'i Freda (2018) avy amin'i Warren Corder, "Warbec Photography"